Taiwan: Antso mba hanopaza-maso ny politikan’ny angovo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2011 15:35 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Ελληνικά, 简体中文, 繁體中文, Español, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay momba ny Horohorontany Japana2011.
Nampitahotra ny vahoakan'i Taiwan ny tranga niseho tany amin'ny toby nokleary any Fukushima any Japana, momba ny fiarovana ny toby nokleary any amin'ny fireneny.
Mba hamadihana ny olana misy amin'izao fotoana ho politika maharitra ho an'ny governemanta, mpampiasa aterineto maro no nangataka ny governemanta Taiwanais mba hamerina handinika tsara ny politikam-pirenena momba ny angovo sy ny orinasa.
Fifanoherana anatiny amin'ilay politika
famoriam-bahoaka manohitra ny nokleary tany an-drenivohitr'i Taiwan, Taipei tamin'ny 20 Martsa 2011. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr KarlMarx (CC BY-NC-ND 2.0).
Tamin'ny 14 Febroary 2011, izany hoe iray volana talohan'ny horohorontany sy tondra-dranobe nandrava an'i Japana, nanao fanambarana ampahibemaso ny Birao misahana ny fiarovana ny tontolo iainana any Taiwan, izay nampiandraiketin'ny Biraon'ny Angovo ny politikan'ny angovom-pirenena ho an'ny 2011-2020.
Na izany aza, heverin'ny vondrona mpiaro ny tontolo iainana fa ity politikan'ny angovo ity dia tsy manaja ny fifanarahana [zh] natao tao amin'ny “Torolalana Maharitra ho Fampandrosoana ny Angovo ” (永續能源政策綱領) [zh] nambara tamin'ny 2008, na ny “Fanambarana ny Angovo Nasionaly” avy amin'ilay fivoriana natao tamin'ny 2009.
Amin'ny fanoherana ireo tanjona napetraka ho an'ny fampihenana ny entona manimba rivotra, amin'ny fampitomboana ny angovo azo havaozina sy ny fampitodihana ny toe-karena hankamin'ny orinasa tsy mandany angovo be loatra, manohana ny fampandrosoana ny orinasa mampiasa angovo simika azo avy amin'ny solika ilay politika vaovao.
Miteraka fifanoheran-javatra ho an'ny fampivoarana maharitra ny angovo fanodina ny tsy fahombiazan'ny fanavaozana ny rafitry ny orinasa ao Taiwan, araka ny asongadin'i [zh] Chia-Yang Tsai (蔡嘉陽) avy amin'ny Tobim-baovao momba ny Tontolo iainana any Taiwan:
Ny orinasa any Taiwan dia mandany maherin'ny 60 isan-jaton'ny fitambaramben'ny herinaratra [an'ny firenena], nefa ny vidin'ny herinaratra ho an'ny orinasa dia antsasaky ny vidin'izany ho an'ny olon-tsotra. Noho izany vidiny ambany dia ambany izany dia tsotra no ahafahan'ny orinasa mandanilany fahatany ny herinaratra. Raha hampitombo ny vidin'ny herinaratra ho an'ny orinasa isika dia mety ho afaka hamongotra ireny orinasa mpandany angovo betsaka sy mpanaparitaka loto be ireny. Rehefa voaovantsika tanteraka ny rafitry ny orinasa dia ho voavahantsika ny olana mikasika ny angovo.
Ilaina ny safidy mazava
Lehilahy tany amin'ny famoriam-bahoaka manohitra ny nokleary tany Taipei, renivohitra Taiwanais, tamin'ny 20 Martsa 2011. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr KarlMarx (CC BY-NC-ND 2.0).
Satria mbola mitohy ny olana ara-nokleary any Japana mpifanila vodirindrina aminy, ilaina fanaraha-maso ny politikan'ny angovo mifandraika amin'izany any Taiwan, indrindra ho an'ny fampandrosoana ny angovo nokleary any an-toerana.
Araka ny lahatsoratra [zh] iray momba ny loza mitatao noho ny angovo nokleary, naneho ny ahiahiny i Yen (焱) fa mety hiteraka tsy fahampian'ny herinaratra any amin'ny firenena ny fampiatoana ireo toby nokleary :
Raha vonona hiatrika ny tsy fahampiana herinaratra sy vonona handresy lahatra ny olona hanaiky ny tsy fahampian'ny herinaratra ianao, mandehana dia tohero ny toby nokleary.
Amin'ny lafiny iray, maro ireo mpampiasa aterineto no manizingizina fa na dia mety hifidy ny hampandroso ny hery nokleary aza ny vahoaka Taiwanais, zava-dehibe ho an'ny vahoaka ny fahatakarana ny risika raisina mialohan'ny hanaovany safidy. Hoy ilay mpitoraka bilaogy Subing argues [zh] tamin'ny 14 Martsa :
Tokony handresy lahatra antsika ireo mpandàla ny herinaratra nokleary amin'ny antony tokony handraisanantsika risika manoloana ireo orinasa sasany mpandany angovo be.
Fametraham-panontaniana momba ny fangatahana
Raha ny marina, momba ny vaovao navoakan'ny Orinasa mpamokatra Herinaratra any Taiwan, nanambàra [zh] i Siro tao amin'ny sehatra fiadian-kevitra iray tamin'ny 21 Martsa :
23,4 isan-jaton'ny fitambaramben'ny famokarana herinaratra amin'izao no tsy ampiasaina akory amin'ny fotoana tena ilàna azy… Raha haatontsika ny toby nokleary telo dia tsy tokony hiatrika tsy fahampiana herinaratra avy hatrany isika.
Nanohy nanazava i Siro fa sady tsy mora vidy ny angovo nokleary no tsy madio:
Mety hampitombo ny vidin'ny angovo nokleary, mihoatra noho ny nambaran'ny Orinasa mpamokatra Herinaratra any Taiwan ny fandiovana ny loto nokleary aorian'ny fampiatoana ireo toby nokleary.
Manohy ihany anefa i Siro fa tsy mora na tsotra ny asa fampiatoana toby nokleary:
我舉我住的澎湖為例, 澎湖舊火力發電廠位置接近市區, 當郊區新發電廠蓋好, 原電廠拆除後, 土地變成價值不斐, 而這一點是核電廠辦不到的..也是台電在計算成本中, 刻意去忽略的. 核電廠因為儲存核廢料, 即使關閉, 也永遠需要管理監控, 更不用說想要遷廠R回收土地.
Raiso ohatra i Penghu, ny toeram-ponenako, akaikin'ny faritry ny tanàn-dehibe ny toby ahodina solika taloha. Rehefa naorina ny tobin'angovo vaovao tany ambanivohitra dia nakatona ilay taloha. Namidy tamin'ny vidiny lafo io tany io. Tsy mbola nitranga tamin'ny toby nokleary mihitsy izany … Izany no tsy noraharahian'ny Orinasa mpamokatra Herinaratra any Taiwan rehefa nikajikajy ny vidiny izy. Mitahiry loto nokleary koa ny toby nokleary. Rehefa haato [ny toby nokleary iray] dia mila fikarakarana mandritra ny fotoana maharitra. Tsy mety ny mampiato ny toby ary mampiasa ny tany indray avy eo.
Loza mitatao mandrakariva ny fifehezana toby nokleary sy loto nokleary. Nanontany i Tyrone tao amin'ny sehatra adihevitra tamin'ny lahatsoratra momba ny lozan'ny nokleary [zh] tamin'ny 14 Martsa:
Raha misy hadisoana kely amin'ny fifehezana [ny toby nokleary] dia miparitaka ny loto mitondra taratra. Nahoana isika no mila manao sorona ny hasambaran'ny taranatsika mba hahazoantsika aina fotsiny?
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay momba ny Horohorontany Japana 2011.